Fahamarinan-toeran’ny fiainam-bahoaka amin’izay | NewsMada
Isa, roa… Roa taona katroka izao ny fitondrana. Mby aiza? Tsy nitsahatra niady sy nitady fahamarinan-toerana sy fitoniana politika ny fitondram-panjakana. Izay no hoe antoka amin’ny fanarenam-pirenena sy fampandrosoana.
Tsy afa-manoatra amin’izay fanarenam-pirenena sy fampandrosoana izay, fa hoe tsy misy ny fahamarinan-toerana sy fitoniana hahazoana miasa? Na sanatria ny tsy fiasana no fototra sy fositra amin’ny tsy fahamarinan-toerana sy fitoniana…
Misy antony ao, matoa miteny lava ny fiombonambe iraisam-pirenena ny amin’ny fitondrana tsara tantana, fanjakana tan-dalàna, ady amin’ny kolikoly… Tsy mahamarin-toerana izany? Na tsy mazava… Tsy ahazoana famatsiam-bola koa.
Anisan’ny tsy mahamarin-toerana ny tsy fahazoam-bola, fa tsy afa-mikofoka sy tsy afa-miasa. Tsy mitady lalan-kafa sy fomba hafa ihetsehana? Mahatsinjo mialoha hatrany izay mety hitranga ny hoe mpitondra, na izay tsy ampoizina aza.
Hatramin’izao, mbola miady sy mitady fahamarinan-toerana sy fitoniana ny mpitondra? Mila tsy ho fantatra na tsy mazava loatra intsony izay tena laharam-pahamehana sy izay heverina ho zava-dehibe tsy maintsy atrehina amin’izao.
Mbola tsy inona amin’izany ny fahasahiranam-bahoaka? Tsy mahamenatra na manala baraka, zaka ihany, tsy atahorana… Tonga hatrany amin’ny tombana sy ny fiheverana hafahafan’ny sasany hoe tsy mampiditra fa mandany vola.
Ny fampiantranoana fivoriana iraisam-pirenena Comesa sy ny Frankôfônia amin’izao no laharam-pahamehana, raha eo amin’ny lafiny fandriampahalemana sy fanorenana fotodrafitrasa, ohatra. Na famoronana asa…
Mialoha ny fandraisana vahiny, tsy tokony mba hilamina sy madio ve aloha ny ao an-tokantrano? Voalohany amin’izany ny olona. Ho an’ny olona izay atao, fa tsy iza atao no zava-dehibe noho ny olona sy ny maha olona…
Sao lasa mpifosa vao mifafa trano sy mangarom-bilany hoe ahoana amin’izay ny atao an-trano? Anjaran’ny tompon-trano ny manary lavenona. Mila fahamarinan-toerana amin’izay ny fiainam-bahoaka alohan’ny handraisam-bahiny?